Excel Finance and Admin Staff | Facilitation Limited ﻿
20.5.2022, Full time , Consulting / Professional Services
Company: Facilitation Limited
A challenging work space associated with learning opportunityConsulting services for company registration, secretarial services, investment permit and financial services
Finance and admin လုပ်ငန်းများကို Excel programming ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ရန်။
	Excel based စာရင်းဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ခြင်း။
	အခွန်ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
	ရုံးတွင်း၊ ၀န်ထမ်း စည်းမျဉ်းများ လိုအပ်သလိုပြုစု၊ မွမ်းမံ ကွပ်ကဲခြင်း။
	ရုံးတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စများပုံမှန်ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ ပြင်ပရုံးဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
စာရွက်စာတမ်းနှင့် မှတ်တမ်း ထိမ်းသိမ်းခြင်း။
	နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ကိစ္စတစ်ခုချင်း အလိုက် Job Code များတွင် Soft/ hard file များတွင် မှတ်တမ်း တင်ခြင်း။
Small office ဖြစ်သဖြင့် အထက်ပါ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများအပြင် အောက်ပါတာဝန်များပါ ပူးတွဲ ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
	လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် အရ ခရီးသွားလာခြင်း
	သုသေသနဆောင်ရွက် ၍ အစီရင်ခံစာများ ရေးသားခြင်း
	ဘာသာပြန်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း
	Corporate Secretarial နှင့် Investment Proposal လုပ်ငန်းတွင် Management မှ တာဝန်ပေးသလို ပူးတွဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း
	B.Com သို့မဟုတ် တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရ ပြီး စာရင်းဒီပလိုမာ
	စာရင်းလုပ်ငန်း ကို Final account အထိ ရေးဆွဲ ခြင်း၊ အခွန်ရုံးနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ခြင်းများ
	မြန်မာဘာသာကို ရုံးသုံးစာ ပုံစံ ရေးသား နိုင်ရမည်။
	အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား Senior များ၏ ထိုက်သင့် သော ကြီးကြပ်မှု အောက်တွင် စာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ Email၊ စာတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်ခြင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
	Excel financial နှင့် Data Model ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက် နိုင်သူ။
	လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များ၊ အလုပ်အပ်နှံသူများ၊ ရုံးဌာနများနှင့်ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
	အထက်ဖေါ်ပြပါ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်မျိုးတွင် လုပ်သက် (၂) နှစ်ရှိသူ။ (မှတ်ချက်။ ။ ကွန်ပျူတာ နှင့် ဘာသာစကား အားသာချက် ရှိ၍ ကြိုးစားဆောင်ရွက်လိုသူများ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ လုပ်သက်မပြည့်မှီလျှင်လည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။)
လျှောက်ထားလိုသူများသည် administrator@facilitation-center.org သို. CV၊ မျှော်မှန်းလစာ နှင့် Reference နှစ်ဦး ၏ အချက်အလက်များ ပါ ပေးပို. လျှောက်ထား နိုင်သည်။
Language skills English (Intermediate) and English (Advanced)
Work location Yaw Min Gyi Street, Dagon Township
Company Industry: Consulting and Finance
4 Days, Full time , Consulting / Professional Services
ဘဏ္ဍာရေး စာရင်းနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၁။ ဘဏ္ဍာရေး စာရင်း မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ တို့အရ လည်းကောင်း၊ အခြားဥပဒေများအရ လည� ...
A challenging work space associated with learning opportunity
Consulting services for company registration, secretarial services, investment permit and financial services
Excel Finance and Admin Staff Finance and admin လုပ်ငန်းများကို Excel programming ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်ရန်။ တာဝန် စာရင်း 	Excel based စာရင်းဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ခြင်း။ 	အခွန်ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း အုပ်ချုပ်ရေး။ 	ရုံးတွင်� ...
•	မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ဥပဒေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ ဥပဒေ တို့အရ လည်းကောင်း၊ အခြားဥပဒေများအရ လည်းကောင်း ရင်းနှီးမြှုပ် နှံသူများအား ၀န်ဆောင်မှုပေးရ သည့် Investment Proposal နှင့် Corporate Secretarial စာရွက� ...
Accountancy Jobs Accountancy Jobs Consulting and Finance Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Mandalay Region 467 Days
Mandalay Region 499 Days